Otu esi etinye Google Translate na toolbar? - LifeBytes | LifeBytes
Kedu otu esi etinye Google Translate na ogwe ngwaọrụ? Onye ntụgharị google nwere ihe karịrị nde ndị ọrụ nde 200, ọ bụkwa sistemụ na -asụ ọtụtụ asụsụ na -akwụghị ụgwọ nke ị ga -esi sụgharịa ọdịyo, akwụkwọ, onyonyo na, n'ezie, ibe.
Ọ bụrụ na ị na -ahụkarị ibe ma ọ bụ akụkọ n'asụsụ Bekee ma ọ bụ asụsụ ọzọ na onye ntụgharị okwu anaghị arụ ọrụ ozugbo, Anyị ga -egosi gị ụzọ iji nweta ya na ogwe ngwaọrụ gị ka ị nwee mgbe ịchọrọ.
1 Wụnye Google Translate n'ụzọ dị mfe
1.1 Nzọụkwụ 1.
1.2 Nzọụkwụ 2.
1.3 Nzọụkwụ 3.
1.4 Nzọụkwụ 4.
1.5 Nzọụkwụ 5.
2 Debe Google Translate na -akpaghị aka maka ibe niile
Wụnye Google Translate n'ụzọ dị mfe
Onye ntụgharị Google nwere ndọtị n'ime ụlọ ahịa weebụ Chrome, na ịnweta ya usoro a dị nnọọ mfe na nkume:
● Nzọụkwụ 1.
Na isi peeji nke Chrome ị ga -ahụ akara ngosi na aha ụlọ ahịa Weebụ Chrome, pịa ya ma ị ga -ahụ ọtụtụ ndọtị dị na ibe ahụ.
● Nzọụkwụ 2.
Gaa na igwe nchọta dị na ogwe aka ekpe, wee pịnye Google Translate n'ebe ahụ. Mgbe ịmechara nchọta gị, ị ga -ahụ akara ntụgharị google, pịa ya.
● Nzọụkwụ 3.
Ozugbo ị banye na peeji ntụgharị Google gaa na ala ị ga -enwe ike ịhụ ma gụọ atụmatụ, nyocha, ọrụ, na amụma yana usoro nzuzo nke ndọtị na -enye gị, yana n'elu nhọrọ ịgbakwunye na Chrome.
● Nzọụkwụ 4.
Ịhọrọ nhọrọ Tinye na Chrome ga -eme ka nbudata nrụnye malite ozugbo, ma emechaa, ị ga -enweta ọkwa nkwenye maka nrụnye mmemme ka ịmalite.
● Nzọụkwụ 5.
Iji gosi na etinyere ndọtị ahụ nke ọma gaa na folda ndọtị.
Debe Google Translate na -akpaghị aka maka ibe niile
Mgbe ịtinye mgbakwunye na ihe nchọgharị gị, ị ga -ahụ akara ntụgharị Google dị na ogwe elu
Ọ bụrụ na ị pịa akara ngosi ị ga -ahụ nke ahụ enwere nhọrọ na -ekwu "tụgharịa asụsụ ibe" Na agbanyeghị na nke a bụ ihe anyị chọrọ, anyị ga -enye gị echiche ka mma.
Gaa na akara ntụgharị Google wee pịa n'akụkụ aka nri nke òké gịOzugbo ịmechara ihe a, ị ga -ahụ obere ndepụta nhọrọ, gụnyere nhazi nke ndọtị, pịa ebe ahụ.
A ga -eziga gị na taabụ ọhụrụ ebe obere igbe ga -apụta nke nwere aha na -esote: Nhọrọ Mgbakwunye Chrome, na ebe ahụ ị ga -ahọrọrịrị asụsụ gị (Spanish) wee pịa chekwa.
Ọ bụrụ na mgbe ịmechara nke a, ị ga -aga na ibe ịchọrọ, n'agbanyeghị ma ọ dị n'asụsụ Bekee, French ma ọ bụ Chinese, site na ịpị akara ngosi wee họrọ ịsụgharị ibe ahụ, ọ ga -eme ya n'asụsụ Spanish, ma ọ bụ ọ nwere ike ị gaghịdị pịa akara ngosi, ebe a ga -atụgharịrị ibe ahụ na akpaghị aka. N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike idozigharị ederede ahụ n'asụsụ mbụ ya.
Obi abụọ adịghị ya, site na ndọtị a, ị nwere ike ịtụgharị asụsụ ọsọ ọsọ ibe weebụ ọ bụla ebe ị nọ n'asụsụ ọ bụla masịrị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Netwọk » Kedu otu esi etinye Google Translate na ogwe ngwaọrụ?
Kedu otu esi ebudata Adblock n'efu?
Kedu otu esi etinye mgbakwunye na Google Chrome?